တရုတ် Richina - စော Blade ကိုအတူတယ်လီစကုပ် Tree Pruner
စော Blade ကိုအတူတယ်လီစကုပ် Tree Pruner
Basic Info Model No.: HG1401 Head Material: Aluminium Alloy, Carbon Steel Specification: Medium, Big Application: Garden Shovel, Snow Shovel, Farming Shovel, Other Handle Material: Steel Shape: Sharp Spade Function: Multifunctional Folded: Folded Attachment: Attachment Customized: Customized Color: Other OEM Order: Acceptable Extension Length: 2475mm Collapse Length: 1635mm Additional Info Packaging: 12pcs/ctn Productivity: 300000pcs per month Brand: RHE Transportation: Ocean,Air Pla...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: HG1401
ဦးခေါင်းပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း, ကာဗွန်သံမဏိ
specification: အလတ်စား, Big
extension အလျား: 2475mm
တိုးချဲ့ Tree Pruner
1635mm-2475mm ကနေချိန်ညှိသစ်ပင် pruner ခြုံငုံအရှည်
ကွေးသို့မဟုတ်ဒူးထောက်သို့မဟုတ်သိပ်သည်းသို့မဟုတ်မိတ်ကိုချုံသို့ရောက်ရှိလာပြီမပါဘဲအနိမ့်ဖြတ်တောက်မှုအောင်, တစ်ဦးလှေကားတက်မပါဘဲမြင့်သောအကိုင်းအခက် pruning များအတွက်စံပြ
ကြိုး-အခမဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူတိုးချဲ့သစ်ပင် pruner သင်နှစ်လက်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်နှင့် anags နှင့်ရှုပ်ထွေးဖယ်ရှား
Electrophoretic # 50 သံမဏိလွှဓါး
ဓါးနှင့်လူမီနီယံလက်ကိုင်ဖြတ်တောက် SK5 ကာဗွန်သံမဏိ
စံပြတိုးချဲ့ Tree Pruner ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်လူမီနီယမ် Tree Pruner အရည်အသွေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ဝင်ရိုးစွန်းစောနှင့် Pruner ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ဥယျာဉ် Tools များ Pruning
တံစဉ်များကိုကတ်ကြေးဥယျာဉ် Tool ကို
ညှပ်ဥယျာဉ် Tool ကို Pruning
စော Blade ကိုနှင့်အတူလူမီနီယမ် Long ကလက်ကိုင်သစ်ပင် Pruner
အကြမ်းခံခြံဝင်းလှုပ်ရှားမှု Tree Pruner 7ft-14ft